China yakutya yima yima yakutya mveliso kunye nabenzi | Hong Bang
Okwakhiwa iphepha yima yakutya
iphepha lokuma isingxobo sesona sithandwayo sopakisho lwentengiso kuba le ndlela yokupakisha iyahluka kwaye iyasebenza kwaye inomtsalane. Njengoko igama ngokwalo libonisa, ezi ngxowa ziyakwazi ukuma kuyo yonke indawo enzima. Inesakhono esishelufini sokubonisa kwaye banokunciphisa iimfuno zokugcina kunye nokwandisa indawo yeshelufu. Ngokwesiqhelo, isikhwama sokuma sisebenzisa ikakhulu i-snack, i-condiment, ubucwebe, iti okanye ukupakisha ikofu. Iipropati zesikwama sokuma
isingxobo sokuphakama senziwe kwizinto ezininzi zokuthintela izinto ezinokuthi zihlelwe ngokwamaqela ama-3 aphambili, ahlanganisanayo ukubonelela ngengxowa eneempawu ezizinzileyo nezomeleleyo. La maqela ma-3 a:
Uluhlu lwangaphandle: luvumela ukushicilelwa kwemizobo ukuba kwenzeke, kuthwala intengiso edlulisa umyalezo wophawu kunye nokubhenela kubathengi.
maleko ophakathi: usebenza njengesithintelo sokukhusela ukuqinisekisa ukuba umxholo wengxowa igcinwa ikhuselekile kwaye intsha.
maleko wangaphakathi: ungqimba olubaluleke kakhulu phakathi kwezi zintathu. Olu luhlu luhlala luvunyiwe fda ukuqinisekisa ukuba ukutya kukhuselekile xa kudibana nokupakishwa. Kukwatywinwa bubushushu ukuqinisekisa abathengi ukuba isingxobo asikhange siphazanyiswe.
isikhwama sokuma sikwavumela neempawu ezinokuthi zenziwe ngokwezifiso ezinje ngee-zipper, imingxunya ephezulu, iincwadana zokukrazula kunye nezipeki ukuphucula ukhuseleko lwentsebenzo kunye nomgangatho ophezulu kuya kuba ngumgaqo wethu wokuqala. Yonke imveliso yethu yenziwe ngezinto zokutya ezikwibakala lokutya oko kuthetha ukuba ifilimu esiyisebenzisayo, i-inki kunye nomgca wemveliso zi-100% zokhuseleko kuye wonke umntu omdala nokuba ngumntwana. Ngapha koko, singqongqo ngomgangatho oko kuthetha ukunganyamezeli nakweyiphi na indlela yokulalanisa ebonisa kulwakhiwo olomeleleyo, ukuqina komoya kunye nokushicilela okucacileyo. Ukupakisha umdlalo oethe-ethe kunye nogqibeleleyo kunye neemfuno zabathengi ziya kuhlala ziyinjongo yethu.
phawu yima yakutya
Vumba ubungqina bokukhanya kobungqina
ukuvuza kwefestile kwivenkile ye-vivi yangaphandle enobuhlobo enokuphinda isetyenziswe kwakhona
ubunzima bokukhanya kunye nokuphatheka akukho mdlalo wokulinganisa kulula ukuma
bpa, ilothe, i-pvc, uyilo olungenasimahla kunye nokwenza ngokwezifiso
Nantsi ipakethe ye-hongbang. Sinikezela ngeendlela ezahlukeneyo zokupakisha ukutya kwiimfuno ezahlukeneyo kunye nokusetyenziswa. Imveliso yethu yamkela naziphi na iintlobo zemveliso yesiko. Singayenza imveliso yakho ibe yimbonakalo eyahlukileyo efana nomphezulu we-matte, umphezulu we-gloss okanye ubabonise kunye ekupakishweni. Sitshele imfuneko sakho siya kudibana nazo zonke iintlobo zeemfuno. Asivelisi iimveliso kwaye sizama ukukuqhubela kuzo; simamela kwiimfuno zakho kunye neenjineli ezintsha eziza kusombulula iingxaki zakho zokupakisha.
iinkonzo kunye newaranti sineqela lenkonzo yabathengi elisebenzayo ukuphendula nokusombulula umbuzo ngaphakathi kweeyure ezingama-24. Ityala ngalinye liya kuba nomntu othile ukuqinisekisa ukuba uyilo, ubungakanani, umgangatho kunye nomhla wokuhanjiswa ziyahambelana neemfuno. Siyakuthanda ukubonelela ngeenkonzo ezilungileyo kwaye sinike inkxaso enkulu kumthengi wethu.
Egqithileyo Ukuhanjiswa okukhawulezileyo kokuPakishwa kokutya okuqhelekileyo
Okulandelayo: Ibhegi ukutya Pet